Golden Future (@golden.future) - PALnet
Some Contents of Rural Area where I Stay မင်္ဂလာပါ မိုးယံခါဝယ် ယာကွင်းတွေမှာ စိမ်းစိုနေသော သီးနှံပင်တွေ လန်းဆန်းကြေသလို မစိုက်ပျိုးရသေးတဲ့ လယ်ကွင်းတွေမှာတော့ ရေတွေ ဖွေးနေတတ်ပါတယ်။ စိမ်းစိုနေသော ယာကွက်တွေမှာတော
Cloud among the Palms
Plumeria frangipani တရုတ်စကားပန်း This flowers are called Tarote Sagar by Burmese pronunciation. And you?
Agricultural State and Political Crisis မင်္ဂလာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိုးရာသီ ရောက်နေပြီ ဆိုတော့ကာ မိုးစပါး စိုက်ပျိုးကြပါတယ်။ ကျွန်တော် နေထိုင်ရာ ဒေသမှာလည်း မိုးရေကို အဓိကထား အသုံးပြုရသော စပါး စိုက်ပျိုးကြပါတယ်။…
Small Wild Flowers တောပန်းလေးတွေ ဝေဆာပွင့်လို့ လှနေကြသည်။
Good Morning Thought Watching Sunrise Good morning at the morning when the red sun raise! Blessed are those who are blessed. May they be filled with all blessings. It is beautiful to watch the sunrise in
Green Landscape Viewing
Shwe Kyak Yak Pagoda beside Ayerwaddy River Good morning စစ်ကိုင်းဘက်ခြမ်းမှ ရွှေကြက်ယက်ဘုရား လှမ်း၍ ဖူးမြော်ခြင်း
Local Landscape Views မင်္ဂလာပါ။ ယခု ကျွန်တော် နေထိုင်ရာ ဒေသသည် မိုးကောင်းတော ရပ်ဝန်းပါ။ မိုးကောင်းတော ဆိုတာက မိုးကောင်းမှ သီးနှံတွေ စိုက်ပျိုးလို့ ကောင်းပြီး ရိတ်သိမ်းရတဲ့ အခြေအနေရှိတဲ့ အရပ်ကို